Imodyuli yokujonga umfanekiso oshushu ye-China M640 kunye neFektri | UDianyang
Iimpawu zeMveliso ezi-1
1. Imveliso incinci ngobukhulu kwaye kulula ukuyidibanisa;
2. I-interface ye-FPC yamkelwe, etyebile kunxibelelwano kwaye kulula ukunxibelelana namanye amaqonga;
3. Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi;
4. Umgangatho ophezulu womfanekiso;
5. Ukulinganisa ubushushu ngokuchanekileyo;
6. ujongano lomgangatho wolwazi, ukuxhasa uphuhliso lwesibini, ukudityaniswa ngokulula, inkxaso yokufikelela kwiqonga lokuqhubekeka elinengqondo.
I-FOV / ubude bendawo
* Ujongano lweparalles kwimowudi yokuphuma eyi-25Hz
<Iilensi ezingama-30 （13mm
26 * 26 * 26.4 （13mm ilensi
ukufana / i-USB
I-SPI / I2C / i-USB
Ukuphuculwa kweenkcukacha ezininzi
Ukukhanya okumhlophe / ukushushu okumnyama / iipleyiti ezinombala wobuxoki
-20 ℃ ~ + 120 ℃ (eyenzelwe ukuya kuthi ga kwi-550 ℃)
± 3 ℃ okanye ± 3%
Ukulungiswa kwamaqondo obushushu
Isikhokelo / esizenzekelayo
Iziphumo zobalo lobushushu
Imveliso yexesha elifanayo
Ubalo lwamanani obushushu
Inkxaso ubuninzi / ubuncinci benani, uhlalutyo lobushushu
Ukucatshulwa kwe-infrared thermal kuphula ngokusebenzisa izithintelo ezibonakalayo ze-physics yendalo kunye nezinto eziqhelekileyo, kunye nokuphucula ukubonwa kwezinto. Yisayensi nobuchwephesha obuphezulu bale mihla, obudlala indima ebalulekileyo nebalulekileyo ekusetyenzisweni kwemikhosi yezomkhosi, kwimveliso yezemveliso nakwezinye iinkalo. Luhlobo lwezixhobo ezisebenzisa itekhnoloji ye-infrared thermal teknoloji ukuguqula ukuhanjiswa kobushushu bento leyo ibe ngumfanekiso obonakalayo ngokufumana i-infrared radiation yento, ukwenziwa kwemiqondiso, ukuguqulwa kwesithombe kunye nezinye iindlela.
Olu luyilo lwe-infrared thermal luyile ukusuka kumatshini omkhulu ukuya kwisixhobo esiphathwayo kuvavanyo lwentsimi, ekulula ukuluqhuba nokuluqokelela. Ukuqwalaselwa ngokupheleleyo kweemfuno zomsebenzisi kunye nemeko yokusingqongileyo, imodeli inomdla kwaye imfutshane, kunye neshishini elimnyama njengowona mbala uphambili kunye nokutsala ngamehlo okumthubi njengokuhombisa. Ayaneli kunika abantu imvakalelo yobuhle yesayensi kunye netekhnoloji ephezulu, kodwa ikwaqaqambisa umgangatho owomeleleyo nozinzileyo wezixhobo, ohambelana nomgangatho weshishini lwezixhobo. Uyilo grade ezintathu zokufunda kwakhona, inkqubo yonyango ngokugqwesileyo komhlaba, kunye manzi elungileyo, zingabi nalo uthuli, yokusebenza shockproof, zilungele zonke iintlobo bume mveliso zorhwebo. Uyilo lulonke luhambelana ne-ergonomics, ujongano lomatshini womatshini obonakalayo, ukubamba ngesandla okuhle, idrophu yokulwa, ukungazibhaqi okungafakwanga umnxeba kunye nokuchonga, ukusebenza okukhuselekileyo nokulula.
Kwisicelo esisebenzayo, umfanekiso ophathwayo oshushu ophethe ngesandla usetyenziselwa ikakhulu ukusombulula ingxaki kwimizi-mveliso, enokuthi ikhawuleze ibhaqe ubushushu beendawo zokulungisa, ukuze zibambe ulwazi oluyimfuneko, kwaye zikhawuleze zichonge iziphoso zezixhobo ze-elektroniki ezinje ngeemoto kunye Abaguquleli. Ingasetyenziselwa ukukhangela unxibelelwano olubi kwizixhobo zombane, kunye nezixhobo ezisebenza ngobushushu, ukuthintela imililo emibi kunye neengozi Iingozi zibonelela ngeendlela zokuchonga kunye nezixhobo zokuqonda isifo kwimveliso yoshishino kunye neminye imiba emininzi.
Izixhobo ze-infrared thermal imaging zinokusetyenziswa njengesixhobo esisebenzayo somlilo. Siyazi ukuba kwindawo enkulu yehlathi, imililo efihliweyo ihlala ingakwazi ukugwetywa ngokuchanekileyo zii-UAVs. Umzobo weThermal unokukwazi ukuyibona ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo le mililo ifihliweyo, ayichane ngokuchanekileyo indawo kunye nobungakanani bomlilo, kwaye afumane indawo yokutshaya ngomsi, ukuze kuthintelwe kwaye kucinywe kwangoko.
Umzobo 1 womsebenzisi
Imveliso yamkela isinxibelelanisi se-0.3Pitch 33Pin FPC (X03A10H33G), kunye nevolthi yokufaka yile: 3.8-5.5VDC, ukhuselo lwe-undervoltage aluxhaswanga.
Inombolo yepini igama chwetheza
1,2 VCC Amandla - Ukunikezwa amandla
3,4,12 GND Amandla - 地
Mna / O -
Mna / O - I-DP
I - I-USB yenziwe
Ukungagqibeki: 1.8V LVCMOS; (ukuba kufuneka i-3.3V
Iziphumo ze-LVCOMS, nceda unxibelelane nathi)
Mna / O
Unxibelelwano lusebenzisa inkqubo yonxibelelwano ye-UVC, ifomathi yomfanekiso yiYUV422, ukuba ufuna ikhithi yophuhliso lonxibelelwano nge-USB, nceda unxibelelane nathi;
Kuyilo lwe-PCB, uphawu lwevidiyo yedijithali efanayo ecetyiswayo yokulawula i-50 Ω
Uluhlu lwevolthi yokufaka VIN -
Umthamo IZILWANYANA I-USBEN = GND
I-USBEN- HIGN -
DP, DM ukuya kwi-GND -0.3V ukuya + 6V
IVIDIYO kwi-GND -0.3V ukuya + 3.3V
Iqondo lobushushu elisebenzayo -40 ° C ukuya kwi-85 ° C
Qaphela: Uluhlu oludwelisiweyo oludibana okanye olugqithisileyo kumanqaku aphezulu kunokubangela umonakalo osisigxina kwimveliso, oku kukulinganisa uxinzelelo; sukuthetha ukuba ukusebenza kweMveliso phantsi kwezi okanye naziphi na ezinye iimeko kuphezulu kunoko kuchazwe icandelo lokusebenza kwale nkcazo. Ukusebenza ixesha elide okudlula iimeko eziphezulu zokusebenza kunokuchaphazela ukuthembeka kwemveliso.
Isinxibelelanisi sedigital yokulandelanisa umzobo (T5)
Umzobo: 8bit Umfanekiso ofanayo
Umzobo: 16bit Umfanekiso ofanayo kunye nedatha yeqondo lobushushu
(1) Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe isampulu yokunyuka kwesampulu yedatha;
(2) Ungqamaniso lwentsimi kunye nongqamaniso lomgca zombini zisebenza kakhulu;
(3) Ifomathi yedatha yomfanekiso ngu-YUV422, idatha ephantsi yedatha ngu-Y, kwaye ibhitithi ephezulu ngu-U / V;
(4) Iyunithi yedatha yobushushu ngu (Kelvin (K) * 10), kwaye ubushushu bokwenyani lixabiso lokufunda /10-273.15 (℃).
1. Sukujonga ngqo kwimithombo yelothe ephezulu njengobushushu belanga;
2. Sukuchukumisa okanye usebenzise ezinye izinto ukungqubana nefestile yomtshini;
3. Musa ukuchukumisa izixhobo kunye neentambo ngezandla ezimanzi;
4. Musa ukugoba okanye ukonakalise iintambo zokudibanisa;
5. Musa ukuzikhuhla izixhobo zakho ngezithambisi;
6. Sukuzikhupha izixhobo okanye uzifakele ezinye iintambo ngaphandle kokuqhawula umbane;
7. Musa ukuqhagamshela intambo eqhotyoshelweyo ngokungachanekanga ukunqanda ukonakalisa izixhobo;
8. Nceda unake ukuthintela umbane ongashukumiyo;
9. Nceda ungazidibanisi izixhobo. Ukuba kukho nasiphi na isiphoso, nceda unxibelelane nenkampani yethu yolondolozo lobungcali.
Umzobo wobume beMechnical
Umsebenzi wokulungisa i-shutter unokulungisa ukungalingani komfanekiso we-infrared kunye nokuchaneka komlinganiso weqondo lobushushu.Kuthatha i-5-10min ukuze izixhobo zizinze ngexesha lokuqalisa.Isixhobo siqala i-shutter ngokungagqibekanga kwaye silungise amaxesha ama-3. Emva koko, ayizukulungiswa kulungiso. Isiphelo esingasemva sinokubiza i-shutter rhoqo ukulungisa umfanekiso kunye nedatha yeqondo lobushushu.
Egqithileyo Imodyuli ye-infrared thermal ye-M384
Okulandelayo: Ikhamera yokucinga ye-infrared thermal ye-DR-23